फेसबुकमा स्टाटस लेखेर लण्डन निवासी गायक बद्री केसीले गरे आत्महत्या
विगत केही वर्षदेखि बेलायतमै रहेका गायक/कलाकार बद्री केसीले आत्महत्या गरेका छन् ।
लण्डनको एजवेरमा बस्दै आएका ३२ वर्षीय केसी रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा शनिबार बिहान शव प्राप्त भएको लण्डनस्थित उनकै सहकर्मी राम थपलियाले नेपाली लिंकलाई जानकारी दिए ।
शुक्रबार दिउँसो करिब पौने ४ बजे निराश भावको फेसबुक स्टाटस लेख्दै आफ्ना साथी, परिवार र संसारलाई नै ‘गुडबाई’ लेखेका केसी आफै काम गर्ने स्थानीय मिल हिल स्कुलको हाताको सुनसान ठाउँमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
शुक्रबार बिहान एघार बजे घरबाट निस्किएका उनको फेसबुक स्टाटस देखेपछि सहकर्मीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । बेलुका अबेरसम्म खोजी गर्दा पनि उनी भेटिएका थिएनन् ।
आत्महत्याअघि केसीले आफ्नो बैंक खातामा रहेको पैसा समेत परिवारका सदस्यलाई ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ ।
केसीको आत्महत्याको कारण स्पष्ट भइसकेको छैन । उनको शव अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छ र प्रहरीले यसबारे आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
पोखरा घर भएका केसी झण्डै डेढ दशकअघि अध्ययनका लागि बेलायत आएका थिए । केही वर्षअघि नेपाल फर्किएका उनी पछि फेरि बेलायत फर्किएका हुन् ।
लण्डनको एजवेरस्थित मिल हिल स्कुलमा क्याटरिंग सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत थिए बद्री । कलाकारितामा पनि निकै सीपालु केसी बेलायतको नेपाली समुदायमा एक लोकदोहोरी गायकको रुपमा परिचित थिए । उनले अल्डरसटको निरमाया रोधीघरमा सन् २००९ देखि झण्डै पाँचवर्षसम्म लोकदोहोरी गायकका रुपमा काम गरेका थिए । बेलायतका कयौं ठाउँमा आयोजना हुने कार्यक्रममा समेत उनले प्रस्तुति दिने गरेका थिए ।
(If you are in crisis, please seek help immediately.
USA: National Suicide Prevention Lifeline: 800-273-8255
UK : If you feel like you might attempt suicide, or may have seriously harmed yourself, you need urgent medical help. Please call 999 for an ambulance.
Nepal: The Tribhuvan University Teaching Hospital (TUTH) suicide hotline (9840021600) and the Patan Hospital crisis helpline for suicide prevention (9813476123) operate 24 hours.
The Transcultural Psychosocial Organization (16600102005) provides helpline services between Monday to Friday from 9:30 am to 4:30 pm. BPKIHS Helpline: 9805316785, 9802331176 from 8:30 am to5pm everyday.)